यी हुन् भगवान गणेशका ११ स्वरुप, कस्को पूजा गर्दा के फल मिल्छ ? – Khabar Silo
जय हनुमान जी की दुई दिन भीत्र तपाईले सोचेको काम पुरा हुनेछ? .. पूरा पढेर ॐ लेखेर एक सेएर गर्नुहोस्?
अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !अन्य समाचार, हिले भाकल भनेको के हो भन्ने उत्तर तर्फ भाकल भनेको हामीले कुनै पनि देवीदेवता सँग गरिने भाका हो एक किसिमले भनौभने भाकल भनेको भाका नै हो ।**** यो […]
एजेन्शि /करीब २ हजार वर्ष लगाएर बनाइएको (ग्रेट वाल) देखेरै थाहा हुन्छ चिनियाँहरु प्रचीन कालदेखि नै मेहनती थिए । चिनियाँ को मेहनतले बनेको एप्राचीन मन्दिरले संसारलाई चकित पारेको छ । चीनको सान्सी प्रान्तमा रहेको एउटा पाइला राख्ने ठाउँ समेत नभएको भीरमा टाँसेर बनाइएको यो मन्दिर हावामा झुण्डिएको जस्तो देखिन्छ । मन्दिरलाई १५ सय वर्ष पुरानो […]
Posted on March 15, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ- सिन्धुलीको रिठ्ठे भिरको कथा सायद सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । यहाँको धेरै पुरानो कथा अनि कहानी छुट्टै रहेको छ । धेरै पहिला सडक निर्माणका क्रममा बाटो खन्ने क्रममा यहाँ धेरै डोजर र जेसिबी बिग्रेको कथा सबैले सुनाउछन् । त्यहा बाटो खन्न लाग्दा आफै स्टार्ट बन्द हुने जस्ता अचम्मका कुराहरू हुन थाले । धेरै पटक […]